Paula Gallego. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke ink na-eme ka anyị dịrị n'otu | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto: Ebe nrụọrụ weebụ Paula Gallego.
Paula Gallego, Na mgbakwunye na ịbụ onye edemede, ọ bụ onye nkuzi na onye na-ahụ maka ọdịmma mmadụ ma bipụtara akwụkwọ akụkọ ole na ole na ndị mbipụta dịka Kiwi, Escarlata na Planeta. N'etiti aha ya bụ Cristal, emerald warrior, nke bụ onye ikpeazụ na Ateneo de Novela Joven de Sevilla chọr'inwe, Oge 13 na Vienna, Abalị 3 na Oslo, A ụbọchị oyi, Izu 7 na Paris, kuo ume, Ọkụ ọkụ. Nke ikpeazu bu Ink na-eme ka anyị dịrị n'otu, na ọ wepụtara n'afọ a. Enwere m ekele maka oge gị na obiọma gị ajụjụ ọnụ a na o nyere m.
Paula Gallego - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: La ink nke na-eme ka anyị dịrị n’otu bụ akwụkwọ ikpeazụ gị. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na kedu ka esi wee nwee echiche a?
PAULA GALICIAN: Ink na-eme ka anyị dịrị n'otu bụ akwụkwọ ọgụgụ na na-ekwu maka olile anya, ezi na ụlọ n’ụdị ya niile: ịhụnanya maka ndị enyi na ezinụlọ anyị na-ahọrọ, ịhụ onwe anyị n'anya na nnwere onwe. Akụkọ ya ruru na Hasret. Ọ bụ onye mbụ pụtara n’isi m, jikere ikwu okwu. Mgbe ahụ Anik na Kael bịara tinyere ha na ihe ọ bụla ọzọ. Ihe niile dabara n'ụzọ zuru oke: ihe ndị mere eme n'ezie, ụbọchị, obere ihe dabara adaba… Akụkọ ahụ nọ n'ebe ahụ ka m dee.
PG: Ọ bụghị nke mbụ m gụrụ, mana ọ bụ nke mbụ mere ka m banye ụwa ọgụgụ: Ncheta Idhun. Mbụ lẹ mu e-dee lẹ mkpụkpu; na akwụkwọ akụkọ mbụ kwesịrị ekwesị a fantasy akụkọ m onwe bipụtara na 17.
PG: Aga m asị Leigh Bardugo, Holly Black na Sarah J. Maas.
AL: characterdị agwa dị a bookaa akwụkwọ ka ịchọrọ ịmeta ma mepụta?
PG: Jud, na Nwa eze obi ọjọọ. Ọ dị m ka ọ bụ ezigbo mmadụ mepụtara, na-adọrọ mmasị, nwere puku puku dị iche iche. O doro anya na ọ bụ otu n'ime ihe odide m kacha amasị m na m ga-achọ izute ya.
PG: Agụrụ m n’ụtụtụ ma dee n’abalị. Ọ na-amasị m ide ihe mgbe m rụchara ọrụ ndị ọzọ, dị ka ụgwọ ọrụ.
PG: Ebe kachasị amasị m ịgụ bụ na ime ụlọ, na-esote ụlọ ahịa m na tebụl m nwere osisi na akwụkwọ. Ide na-amasị m ịdị na ọfịs m, corks m jupụtara na echiche, okpokoro okpokoro m, akwụkwọ m na shelf na pusi ụra n'akụkụ m.
PG: Mydị ọkacha mmasị m, maka ịgụ na ide, bụ echiche efu. M na-enwekwa obi ụtọ na akụkọ sayensị. Echere m na ndị ahụ bụ ụzọ aghụghọ atọ kachasị amasị m nke kachasị: ntọala akụkọ ihe mere eme, echiche efu na akụkọ sayensị.
PG: Ana m agụcha akwụkwọ Queen nke ihe ọ bụla nke Holly Black, ma ugbu a, m na-arụ ọrụ na-egbuchasị akụkụ nke abụọ na nke ikpeazụ nke Nwa uzu; n'ihu nke Ọkụ ọkụ.
AL: Kedu ka ị chere na mbipụta akwụkwọ bụ maka ọtụtụ ndị ode akwụkwọ ka ha chọrọ ibipụta?
PG: Echere m na ọ bụ ụwa na chọrọ nnukwu ọrụ na mbọ, na kwa oke oke nke chi. Agbanyeghị, ekele maka ndị mbipụta na-apụta, enwere ọtụtụ ohere iji bipụta akwụkwọ. Ahịa buru ibu karịa ka ọ dị iri afọ ole na ole gara aga.
PG: Echere m na ihe ọ bụla anyị bi nwere ike inyere anyị aka n'ụzọ ụfọdụ, mana agaghị m eleda obere ihe mere ọtụtụ ndị anya ka ha na-ata ahụhụ. Maka oge ahụ, ị ga-eguzogide, gaa n'ihu ma nwee olile anya na ihe niile ga-aka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Paula Gallego. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke ink na-eme ka anyị dịrị n'otu